New Boeing 737 MAX Whitewash orinasa: Boeing mpitantana dia manafina ao ambadiky ny lehilahy iray lavo?
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » New Boeing 737 MAX Whitewash orinasa: Boeing mpitantana dia manafina ao ambadiky ny lehilahy iray lavo?
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao farany momba an'i Ethiopia • Interviews • Vaovao • People • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Video
Nofitahin'i Boeing ny FAA tamin'ny fanamarinana ny Boeing 737 MAX, nahatonga olona 157 novonoina tao anaty fiaramanidina Ethiopian Airlines. Ny mpisolovava voalohany misolo tena ny antsasak'ireo niharam-boina dia miteny ao amin'ny eTurboNews Q&A anio.
Fianakaviana namoy havan-tiana tamin'ny fianjeran'ilay fiaramanidina Boeing 737 MAX tamin'ny taona 201,9 namono ny 157 rehetra teny an-tsambo dia teny henjana ho an'i Boeing.
Nilaza ny mpisolovava fa tsy lasa lavitra ny governemanta amerikana tamin'ny fiampangana an'i Mark Forkner Alakamisy (14 Oktobra 2021).
Natolotra ny fampanoavana omaly ny lehiben'ny mpanamory fiaramanidina vaovao nataon'ny Departemantan'ny Fitsarana amerikana momba ny enina noho ny zavatra nataony, anisan'izany ny lainga nandritra ny fizotry ny fanamarinana ny fiaramanidina vaovao.
eTurboNews nanasa an'i Kevin P. Durkin avy amin'ny Clifford Law Firm any Chicago, IL, Etazonia, hiteny mandritra ny podcast androany. Misolo tena ireo olona 70 mahery maty tamin'ny fiaramanidina Ethiopian Airlines tamin'ny fianjerana Boeing 737 MAX izy.
“Lehilahy lavo fotsiny i Forkner. Izy sy Boeing dia tompon'andraikitra amin'ny fahafatesan'ny olona maty tamin'ny fianjeran'ny MAX, "hoy i Nadia Milleron, renin'i Samya Rose Stumo, izay novonoina tamin'ny fianjerana namoizana ain'olona faharoa tamin'ny volana martsa 2019." tombony ara-bola noho ny fiarovana, ary i Mark Forkner dia niasa tao anatin'io rafitra io. Ny mpampanoa lalàna dia afaka mahita olona vitsivitsy izay tompon'andraikitra tamin'ny fianjerana. Ny fianakaviana tokana rehetra namoy olona tamin'ny fianjeran'ny MAX dia nitovy ny fihetseham-pony: ny mpitantana sy ny talen'ny Boeing dia mila migadra. ”
Ny fianjeran'ilay fiaramanidina Etiopiana sidina 302 dia nitranga taorian'ny niaingany tamin'ny volana martsa 2019, ary maty avokoa ireo 157 tao anaty sambo. Dimy volana talohan'io, tamin'ny Oktobra 2018, ny fiaramanidina Boeing 727 MAX voalohany dia nianjera tao amin'ny Ranomasina Java taorian'ny nialany tany Indonezia ka nahafaty ny 189 rehetra tao anaty sambo.
"Ny fifanarahana fanenjehana nahemotra dia tena DOJ Boeing 'Aza manenjika fifanarahana.' Tsy misy olona tena mino fa i Forkner irery no mpilalao ratsy tamin'ity tsindry sarotra ity hahazoana tombony sy tetika hamitahana ny FAA, ”hoy i Michael Stumo, rain'i Samya Rose Stumo. "Mampiseho izany fa ny tale jeneralin'ny Boeing David Calhoun sy ireo mpikamban'ny birao teo aloha dia hanipy olona ao ambanin'ny bus hiarovana ny C-Suite."
Ny DOJ dia nitondra raharaha ady heloka bevava tamin'i Boeing noho ny fahafatesany olona 346 tao anatin'ny lozam-pifamoivoizana roa saingy nandamina ny raharaha tamin'ny fiandohan'ity taona ity tao amin'ilay antsoina hoe Fifanarahana fampanoavana nahemotra. Ny profesora lalàna any Columbia John Coffee tamin'izany fotoana izany dia niantso azy io ho "iray amin'ireo fifanarahana fanenjehana ratsy indrindra hitako." Boeing dia tsy voatery niaiky heloka noho ny fiampangana azy, ary tsy nisy mpiandraikitra Boeing voampanga. Ny orinasan'ny lalàna mpiaro ny heloka bevava ao Boeing dia i Kirkland & Ellis. Erin Nealy Cox, mpampanoa lalàna amin'ny raharaha Boeing, dia nandao ny Departemantan'ny Fitsarana tamin'ny fiandohan'ity taona ity ary tsy ela taorian'izay dia niaraka tamin'i Kirkland & Ellis ho mpiara-miasa ao amin'ny biraony Dallas.
Paul Njoroge avy any Toronto, Canada, izay namoy ny fianakaviany manontolo tamin'ny fianjerana ET302, dia nilaza hoe: "Ny hetsik'i Mark Forkner sy Boeing mikasika ny fanamarinana 737 MAX, famokarana ary famoahana ho an'ny tsena, dia niteraka fahafatesan'olona 346: eo amin'izy ireo ny vadiko, ny reniny ary ny zanakay telo. Tamin'ny fomba amam-panao sy fanaon'ny orinasa, dia tsy nihetsika irery i Mark Forkner. Ireo talen'ny Boeing dia tsy maintsy ho tao ambadiky ny fikoropahana hamokarana ny MAX 737, manosika azy io hidina eny an-tsena, hanangana fidiram-bola sy fidiram-bola avo kokoa, hanaitaitra ny Wall Street, ary raha manao izany, paompy ny tahiry Boeing. Rehefa nianjera tamin'ny 610 Oktobra 29 ny Lion Air Flight JT2018, dia namono olona 189 ny talen'i Mark Forkner sy Boeing tamin'ny dingana fahatelo. Saingy rehefa tsy nahavita nidina ny 737 MAX taorian'io fianjerana io izy, nanala ny fahalalàn'ny besinimaro ilay orinasa tamin'ny fiampangana ireo antsoina hoe 'vahiny' mpanamory fiaramanidina tamin'io fianjerana io, dia azo antoka fa namono olona 157 tamin'ny dingana faharoa, rehefa nianjera ny fiaramanidina Ethiopian Airlines 302 amin'ny 10 martsa 2019.
"Ny mpitsara lehibe federaly dia tokony hanaraka ny fizotrany fikarohana marina, hiampangana ny hafa, indrindra ny mpitantana ambony any Boeing, ary avy eo mahita azy ireo ho tompon'andraikitra amin'ny fahafatesan'ny vadiko, ny zanakay telo, ny rafozako, ary 341 hafa. Nisy ny fihainoana ny hevitry ny kongresy sy ny loholona, ​​izay nandà ny talen'ny tale jeneralin'i Boeing, Dennis Muilenberg sy ny lehiben'ny injeniera John Hamilton hamaly ireo fanontaniana ifotony. Manantena aho fa ny fiampangana an'i Mark Forkner dia hampiharihary ny haben'ny tsy fitandremana, fanafenana vaovao, ary hubris ao anatin'ny Boeing izay nitarika ny fianjerana roa. Mendrika ny hahalala ny besinimaro. Tsy hisy ny rariny ho ahy noho ny fahafatesan'ny fianakaviako, saingy hisy ny rariny ho an'ny besinimaro raha toa ka i Mark Forkner sy ny hafa ao Boeing no miatrika sazy an-tranomaizina faratampony, "hoy i Njoroge.
"Ny fiampangana omaly an'ny lehiben'ny mpanamory fiaramanidina an'i Boeing noho ny famitahana ny manampahefana federaly momba ny MAX 737 dia famotoran-java-misy", hoy i Robert A. Clifford, mpanorina sy mpiara-miasa amin'ny Clifford Law Office any Chicago sy ny Adv Counsel ao amin'ny raharaham-pitsarana natambatra tamin'i Boeing ao amin'ny fianjeran'ny MAX 737 tany Etiopia tamin'ny taona 2019. “Ny fisian'ny famoizana ain'olona 157 mety ho voasoroka raha nanao kabary i Mark Forkner saingy azo antoka fa tsy irery izy.”
Forkner, izay nitarika ny ekipa teknikan'ny sidina 737 MAX nandritra ny firosoany haingana ho amin'ny fanompoana, dia voalaza fa voarohirohy tamina fiampangana hosoka roa nahitana ny ampahan'ny fiaramanidina tamina varotra teo an-toerana sy fanodikodinam-bola efatra. Tokony hanatrika ny zoma any amin'ny tribonaly federaly any Fort Worth, Texas izy. Ny fiampangana goavana indrindra dia sazy mihatra 20 taona an-tranomaizina.
"Ity karazana fitsiriritana orinasa tsy azo ihodivirana ity dia mihoatra lavitra ny lohan'ny mpanamory fiaramanidina ao amin'ilay orinasa izay nanao an-tsitrapo ireo fiaramanidina ireo mba hampitomboana ny tombom-barotra," hoy i Clifford. "Amin'ny maha-mpanolo-tsaina mpitarika amin'ny raharaham-pitsarana an'i Boeing ahy ary miteny amin'ny anaran'ny fianakaviana maro izay tsy hitovy velively, dia miangavy ny DOJ aho mba hanadihady bebe kokoa amin'ny heloka bevava sy ny fiampangana azy hamaritana hoe hatraiza ny famitahana ary iza no tao amin'ny ambanin'izany rehetra izany. Mieritreritra aho fa hahita mpiasan'ny orinasa maro izy ireo nandray anjara tamin'ny fitazonana ny vaovao manakiana avy amin'ny maso ivoho mpanamarina. Ny famotopotorana heloka bevava lalina natao dia natao ho an'ireo fianakaviana ireo izay nanao sorona farany sy ho an'ny vahoaka manidina izay mbola mividy tapakila amin'ny fiaramanidina MAX. ”
“Na dia omena sazy mihatra aza ny sazy any an-tranomaizina dia tsy misy izany raha ampitahaina amin'ireo fianakaviana izay tsy hahita ny olon-tiany intsony. Lasa izy ireo; lasa satria i Forkner dia ao anatin'ny tetikady hanafenana ny fahamarinana amin'ireo izay manana fahaizana manao ireo fiaramanidina ireo ho azo antoka, ”hoy i Clifford. “Ary inona no fihetsika voalohany nataon'i Boeing tamin'ireny fianjerana ireny na dia fantany aza fa nanapaka zoro izy ireo? Ny tompon'andraikitra Boeing dia nisafidy ny hanome tsiny ireo mpanamory fiaramanidina tsy manan-tsiny izay tsy nilazana na inona na inona momba ny rafitra rindrambaiko vaovao izay nanova tanteraka ny fomba fitondran'ny fiaramanidina, ary tsy nanisy firesahana momba ny rafi-rindrambaiko vaovao akory ireo boky fampianarana momba ny fanamoriana. ”
Clifford dia manondro ny Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) izay voalaza fa tsy nozarain'i Forkner tamin'ireo tompon'andraikitra FAA talohan'ny naneken'izy ireo ny fiaramanidina ho azo antoka sidina.
"Mbola tsy fantatry ny besinimaro manidina raha niova ny fomba Boeing ary miasa mangarahara tanteraka amin'ny famelana ity fiaramanidina sy fiaramanidina ho avy ity," hoy i Clifford.